Singapore: Notsikerain’ny Olom-pirenena Ny Doka ‘Manafintohina’ Avy Amin’ny Governemanta · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Marsa 2012 8:02 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Español, Deutsch, русский, Français, Aymara, English
Niteraka fanakianana ny doka fanentanana nataon'ny Minisiteran'ny Fampandrosoana ny Ambanivohitra, ny Tanora ary ny Fanatanjahatena (MCYS) fa mametraka hatrany ny fanavakavaham-bolokoditra manoloana ireo efa nigadra, ireo niharan'ny fanolanana, ny sarangan'olona kely fidiram-bola, ary ny manana fahasembanana.
Ny fanentanana dia ahitana afisy efatra misy ny sarin'ireo mpiasa sosialy sy ny trangan-javatra vitsivitsy efa nanaovan'izy ireo fanampiana. Nasongadina tamin'izany ny teny toy ny hoe “rava”, “simba”, “nilaozana” ary “kivy”. Hita ao amin'ny aterineto sy eny amin'ny lalam-bahoaka tahaka ny fiantsonan'ny fiara fitaterana.
Notsikerain'ny Singaporeana mahatsiaro ho voantohintohina fatratra ireny doka ireny.
@flubberzz: “Fa inona ity ataonao ry MCYS sy ity dokambarotra Starlight?? Iza no nisaina an'itony karazana fanentanana itony ?”
Naneho ny fanohanany ireo mpiasa sosialy Mpamahana bolongana fanta-daza mrbrown , saingy nanamarika kosa izy fa diso ny hafatra nalefan'ny dokambarotra mikasika ny olona manana fahasembanana:
Tiako ireo mpiasa sosialy sy ny zavatra iantsorohany saingy fantaro, ry MCYS, fa tsy very fanantenana ny olona manana fahasembanana.
Itony karazana hafatra itony no mety hahatonga ny hafa hihevitra fa miankin-doha mila famonjena sy fiantrana ny sembana, fa tsy hoe manandanja mafonja ao amin'ny fiarahamonintsika izay mahavita zavatra amin'ny fomba hafa.
Amin'ny maha ray ahy mahalala tsara ny ilain'ny zanaka , tohina tanteraka tamin'ilay hafatra aho.
Amina lahatsoratra avy amin'ny mpiserasera, Ghui nahita fa mety hanimba ny sain'ireo mila fanampiana avy amin'ny fiarahamonina izany afisy izany :
Na dia tsy izany aza no notadiavin'ny MCYS, dia niteraka fitsikerana avy amin'ny fiarahamonina ny afisy ny manoloana ireo sembana na ny olona nitondra takaitra noho ny fianjerana. Na dia tokony ho fandrisihana aza ilay izy, dia nanamafy ny fiheverana izany fa tsy mahavita azy ny olona sembana na kilemaina ka tokony hiantrana. Tsy niteny aho hoe tsy mila tolotanana ireo olona ireo saingy ny fanampiantsika dia tokony avy amin'ny finiavana iombonana ho fifanampiana fa tsy hoe manampy “ireo mampahonena”.
Tsy nanambara zavatra manokana momba ny doka ny fikambanan'ny sembana ara-batana, nilaza ho faly ry zareo fa nanao doka ny MCYS “hiantso ny olona ho amin'ny karazan'asa.”
Ny sasany kosa mahita fa maneho ny fihetsika mahazatra amin'ny manana fahasembanana – na izay ato amin'ny faritra na avy amin'ny fitondrana ao Singapore ny hita ao amin'ny doka:
@sonnylebythebay: “Mbola manana fomba hifampiraharahana/hiasana miaraka amin'ny olona manana fahasembanana & aretina ara-tsaina i Azia. RT @ @kixes http://mrbrwn.co/yDkF53“
@ambarvalia: “Mampiseho ny fahazaran-dratsin'ny governemanta ny dokambarotry ny MCYS ‘tsy misy fanantenana’ fa tokony hankasitraka ny “fanampian”-ny governemanta ny vahoaka.
Ho valin'izany, nanazava ny mpitondra tenin'ny MCYS fa tsy ny olona manana fahasembanana no “tsy misy fanantenana”, fa ny fahatsapana ho tsy manana fanantenana noho ny fahasembanana mahazo azy ireo. Nilaza ny minisitera fa ny fanentanana dia miezaka fotsiny ihany handrisika ny olona hazoto hanao ny asa sosialy ho toy ny anton'asa.